umlunge Modern (ukunakekelwa kanye ekuzikhuliseni - kuyinselelo kunoma yimuphi imfundamakhwela wensimu) zibangelwa abantu ngezinsalela zeminyaka eminingi yomsebenzi zizalela. Ukuze izinhlobonhlobo okuqala libhekene khona inflorescences enganamandla kakhulu sifanamsindvo, kanye okuxekethile ezimbalini ezincane ukuthi babe imiphetho bushelelezi. Namuhla, konke kuye kwashintsha kakhulu: ngeziqu kakhulu kwaqinisa futhi manje bangakwazi ukubamba isisindo yezimbali aminyene futhi ngokuvamile ezimbili zilandelana. izinhlobo eziningi we beaters ezinkulu-ububanzi basukuma ukuba amasentimitha 14 noma ngaphezulu. Amacembe washintsha isimo sabo futhi steel lukathayela, enikeza isitshalo ubuhle nokuba yinkimbinkimbi.
Umlunge: ukunakekelwa futhi kulinywe
Kunoma ingadi, lezi zimbali, ngaphezu kwakho konke, befuna kakhulu indawo kanye ukukhanyisa. Badinga Ukuvikelwa ephelele kusuka umoya ipheshulwa futhi izibani ezikhanya. Futhi zindawo enyakatho ngaphezulu, lapho esekhulile, ukukhanya okwengeziwe badinga. Engxenyeni eseningizimu Russia Imilunge ungasibekezelela shading kancane, ngenkathi sigcina izici zayo eziyingqayizivele zokuhlobisa. Ngaphezu kwalokho, lezi zitshalo bafuna kakhulu phezu komhlaba. Badinga okuxekethile, ezweni kahle akhanywa nge-asidi eliphansi. On ezinye izizathu Imilunge kukhona yokuqhuma ogulayo futhi okubi nakakhulu.
Ngokutshala nezilimo eziyizigaxa zalesi sihlahla sebeqala ukulungiselela ngaphambi kwesikhathi, cishe ababili noma abathathu amasonto. Lokhu kuvamise kwenzeka ekuqaleni kuka-Ephreli. Imilunge, ukunakekelwa kanye ukutshalwa okuyinto - inqubo ngempela enzima, qiniseka ukuhlanza esikalini ngaphambi kokutshala. Kulokhu, lesi sitshalo uyohluma izinsukwana ngaphambi. Ngaphezu kwalokho, le nqubo kuzoveza yokulimala okutshalwe nezinye zezifo.
nezilimo eziyizigaxa ehlutshiwe zisakazwa endaweni efudumele-ovuthayo bese ulinda kuze phansi zabo bavele izindunduma ezincane uhlelo impande. Ngaphambi betshala bayobizwa ofakwe isixazululo ezibuthakathaka manganese, futhi kungenziwa itshalwe emhlabathini. Kwenze phakathi noma kwentwasahlobo lapho phansi nendlu yaqala ukufudumala ngokwanele, futhi asuka yesithwathwa ebusika.
Watshala Imilunge, ukunakekelwa kanye ukutshalwa okuyinto - ngempela inqubo ezithakazelisayo futhi okuthakazelisayo, kumuntu ka 2 kuya 5 cm (kuye ngokuthi ungakanani isibani) ukujula. Ibanga phakathi ama akufanele angaphansi kuka-15 amasentimitha.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi lezi zitshalo zidinga ukunakekelwa efanele. Isimo sezulu esomile kanye nemfudumalo, badinga ukuthambisa luningi. Lokhu kungenxa nezimpande ezijulile kakhulu zokulala. Ngaphezu kwalokho, emva ukuchelela kuyasiza ukuze kuhlukaniswe futhi zamulchirovat phansi emhlabeni izimbali.
Omunye nezindaba embi kakhulu inqubo ukutshalwa lezi zitshalo is okulandelayo: Imilunge okuphakelayo? Ngokuyinhloko, badinga izinhlobo ezintathu Umanyolo:
nitrogen - ekuqaleni, kuze amahlamvu kweqiniso;
eziyinkimbinkimbi - ngaphambi 6-leaf isigaba;
phosphorus-potassium umquba - esikhathini ukubukeka inflorescences.
Lapho umlunge imbali, kuba Angisoze ngakulibala engakubona ngempela! Ubuhle obunjalo singumvuzo esizifanele kunoma wensimu, ngubani wasiphakamisa onzima ezikhulayo kubo. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi umlunge abe efihlekile zinzima kakhulu. Yingakho ukuze kulondolozwe ubuhle isidingo sabo kubophezeleke ezigxotsheni encane.
Izinkinga sinusitis. Izimpawu, ukwelashwa kanye nemiphumela sinusitis
Kuphi e Murmansk izivakashi?